somalia oo dib dhac labaad ku habsaday
Dhamaan waxaan halkan ka salmyaa Ummada soomaliyeed.
Ayaan daranaa soomaliye marka aan is idhaa wax ayaa soo baxayaba maxaa meel kale laga hilaaca ,"salaamu laahi calal xujaaj "waxa mar labaad soomali ku habsaday masiibo Masiibadaas oo ah gacan ku dhiigle C/laahi Yuusuuf oo loo doortay M/weynaha soomaliyeed.
Hadaba ma ka soo bixi doonaa c/laahi xilkaa mise wixii lagu yaqaanay ee ahaa Dictoter nimo iyo keli talis cabudhin dil ayuu u adeegsan xilkan dusha loo saaray .
c/laahi oo hadaladii u danbeeyay ee laga hayay ay ahaayeen roobka deyrta ayaa qaadi, soomaliyi habaar qabe ayay u baahan tahay habaar qabana waa aniga, wax ma ka bedeli doonaa hadaladaa mise dariiqaa ayuu raaci.
su'aal kale ayaan isweydiiyay c/laahi taageero ma ka heli ummada soomaliyeed oo gacan ku siisa hogaaminta dalka waxaan u malynayaa in ay fududahay su'aashaasi,
u malayn maayo in uu taageero heli m/weynana soomali u noqon ha joogta uun in uu sito magacii uu u bukay ee ahaa in uu mar uun noqodo m/weyne.
waxaan filyaa in aan laga soo dhawayn doonin dhulka soomalida c/laahi dhamaantii marka laga reebo in ku raacda dan gaar ah iyo si kale oo uu u jiito waayo ka soo bilow, Dooxada Juba Soo gaadh Banaadir soo dhaaf ilaa gobalada dhexe soo gaadh Boosaaso Iyo qardho soo Gaadho gobalada waqooyi intaas oo dhan umada ku nooli iyo cida ka talisaaba waxaan filyaa waabay tahaye in aanu taageero ka heli karin .
waxaanan hadalkayga ku soo gebogebaynyaa .
Ilaahow Na badbaadi sida xaqa ahna na waafaji soomalina mar uun cagagha u taag nagna dhwar dagaal sokeeye oo danbe.